Diyaarinta Haweenka Kireeystayaasha ee Ilaalinta
Diane Henry Freutel oo ka tirsan Gobolka McHenry, Illinois wuxuu dhawaan dhaxlay boqollaal beero oo dhul ah oo ay wehliyaan dhowr hanti oo kale. Waxay marnaba ku riyootay inay noqon laheyd xubin qoyska ka mid ah ugu dambeysay oo markii walaalkeed iyo aabbaheed ay ku dhinteen marxalad gaaban, waxay dareemeysay in ay ka luntay oo lumisay iyada oo ay la socdaan dhammaan macluumaadka, barnaamijyada, iyo go'aamada looga baahan yahay iyada oo ay ku noolyihiin beerahooda. Waxay u maleynaysaa inay waayo-aragnimadeedii ka soo qaadatay July Haweenka, Cuntada iyo Beeraha Beeraha (WFAN) ee Woodstock, Illinois ayaa timid waqtigii saxda ahaa ee ay ku doonayeen inay indhaha u furto xaqiiqda ah in aysan kaligeed ahayn.
Maaddaama haweenku leeyihiin ama wadaagaan inta u dhaxaysa beeraha beeraha ee Dhulka Galbeedka, waa lagama maarmaan in la gaaro macaamiisha badanaa aan la haynin.
Dumarka kale waxay soconayaan isla wadadaas. Waayo-aragnimadu waxay gacan ka gaysatay kalsoonidii iyo kalsoonidii iyada oo isbeddel ku samaysay nolosheeda.
Dumarka, Cuntada, iyo Beeraha Beeraha ayaa mashquul ku leh haweenka sida Diane ee ku yaala Dhulka Dhexe ee Midowka si ay uga caawiyaan dhisidda xidhiidhyo xirfadlayaasha ilaalinta maxaliga ah kuwaas oo markaa awood u yeelan doona in ay ku caawiyaan dhulalka dhulkooda. Barnaamijka, oo loogu yeero Haweenka Daryeelka Dhulka, waxaa lagu maalgeliyey deeqo ka timid NRCS iyo hay'ado kale. Barnaamijka McKnight ee barnaamijka Mississippi River wuxuu siiyaa maalgelinta WFAN si loogu dhiirigeliyo ka qaybgalka barnaamijyada ilaalinta.
Sanadkii 2014, WFAN, oo lala kaashaday la-hawlgalayaasha maxaliga ah, waxay isugu soo uruurisay shirar todobo dawladood ah si kor loogu qaado horumarinta caafimaadka ciidda. Iyadoo si dhow ula shaqaynaysa khabiirada degaanka, WFAN waxay muujisay mabaadii'da qaab-dhismeedka carrada iyo hawlaha iyo faa'iidooyinka dalagyada daboolaya si kor loogu qaado wax-soo-saarka beeraha iyo wax soo saarka. Dhulka badankood ee gobollada dhexe ayaa si xun u burburay 75kii sano ee la soo dhaafay, laakiin macluumaad cusub oo ku saabsan hababka guulaha ah ee dib-u-dhiska ciidda waa mid aad u dhiirri-galinaya. Caqabada ayaa ah in ereyga laga helo beeralayda iyo mulkiilayaasha. Maaddaama haweenku leeyihiin ama wadaagaan inta u dhaxaysa beeraha beeraha ee Dhulka Galbeedka, waa lagama maarmaan in la gaaro macaamiisha badanaa aan wax laga qaban.